I-2BWM, i-9WM, i-AEWM, i-Afterstep ne-Awesome: ama-WM amanye ama-5 we-Linux | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nochungechunge lwethu lwezincwadi ku Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), namhlanje sizocubungula kabanzi mayelana i-5 WM yokuqala zazo, ngoba ziningi esezikhona.
Lokhu kushicilelwa kanye nalokhu okulandelayo kuzoba nenhloso yokucacisa izici ezibalulekile zazo, njengokuthi, yiziphi zazo amaphrojekthi asebenzayo (asebenzayo) noma angasebenzi (intuthuko imisiwe), hlobo luni, olwabo izici eziphambili, futhi kwezinye izimo, zifakwa kanjani, kwezinye izici. Ngaphezu kwalokho, ukuvumela ukufinyelela isifinyezo esifushane ngeSpanishi, njengoba iningi lamawebhusayithi awo atholakala kakhulu esiNgisini.
Kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi uhlu oluphelele lwabaphathi bamawindi abazimele Ukubuyekezwa kwangaphambilini kungatholakala encwadini yethu elandelayo:
Ndawonye ne Abaphathi BeWindows Abancikile of a Imvelo ethile yedeskithophu. Ngaphezu kwalokho, kusho ukushicilelwa kwangaphambilini futhi kunikeza ukufinyelela okulula kukho konke ukushicilelwa kwangaphambilini kuzindawo zeDeskithophu ezibuyekezwe ngenhla.
1.4 Ngemuva kokuhamba
"I-WM entantayo esheshayo, ngokubaluleka kokuba nemiphetho emi-2, ebhalwe kumtapo wezincwadi we-XCB futhi isuselwe ku- I-MCWM ebhalwe nguMichael Cardell. Ku-2bWM yonke into iyatholakala kusuka kukhibhodi, kepha ithuluzi lokukhomba lingasetshenziselwa ukuhambisa, ukukhulisa usayizi nokuhambisa phezulu / phansi. ISEXWAYISO: Le WM nale ndawo yokugcina kungokwesilingo, i-2bwm yenzelwe kuphela abasebenzisi abaphambili".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe ezinyangeni ezi-2 ezedlule.
Inikeza ukusebenza kwe- "Teleport windows" emakhoneni, maphakathi nokumboza maphakathi nesiqapha.
Faka okokuzungeza okuzungeze ukuqapha.
Ikuvumela ukuthi wande futhi / noma uhlukanise ububanzi noma ukuphakama kwewindi ngo-2.
Kwenza kube lula ukunciphisa noma ukukhulisa amawindi ngenkathi kugcinwa isilinganiso sesici.
Kwenza kube lula ukuhambisa noma ukukhulisa usayizi windows ngamanani amabili achazwe umsebenzisi.
Ifaka imingcele emi-2 eyenziwe ngokwezifiso ngokugcwele ekhombisa isimo sewindi.
Ingenye yama-WM amancane asebenzayo ngosayizi nokusetshenziswa kwememori.
Ayizi nemigoqo noma amapaneli, kepha ihlonipha ukusebenza kwe-_NET_WM_WINDOW_TYPE_DOCK kwamawindi, futhi izokushaya indiva, ngakho-ke iningi lamapaneli nezinsimbi zomsebenzi kufanele zisebenze, njenge-cairo-dock, fbpanel, hpanel, lxpanel , tint2, xfce4-panel kanye nemigoqo yebha ne-dzen2.
"Imenenja yewindi le-X11 ekhuthazwe ngumphathi wamawindi we-Plan 9 8½, owaziwa nangokuthi i-rio. Inikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula futhi esihlanzekile. Luhlobo "lokuchofoza ukubuyela emuva". Isebenzisa i-X11 font system (okusho ukuthi, ngeshwa, kusho ukuthi akukho ukuxhaswa kwe-Unicode)".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe eminyakeni engaphezu kwengu-2 edlule.
Akuhlinzeki ngamadeski wangempela, ukwenza ngokwezifiso, ukubopha okhiye, ukuxhaswa kwe-EWMH, noma ukuhlanganiswa.
Ikhodi yayo isetshenziswa ngabaningi ukuqala ukwakhiwa komphathi wewindi kusukela ekuqaleni.
Isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense evela kwa-MIT.
Amafasitela wokugxila (osebenzayo) akhombisa umngcele omnyama. Futhi imicimbi yegundane nekhibhodi iya kuleli windi eligxile. Ukuchofoza inkinobho yegundane lesobunxele ewindini elingagxiliwe (umngcele omhlophe) kuyiletha ekugxileni.
Ngenkinobho yesokudla noma ikuphi ngaphandle kwefasitela eligxilisiwe, noma kunoma iliphi iwindi elingagxilile, libonisa imenyu evumela, phakathi kwezinye izinto, ukwethula i-xterm entsha, ukukhulisa usayizi wewindi, ukuhambisa, ukuvala noma ukufihla iwindi.
Le WM endala ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe «9wm»Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"Umphathi wewindi omncane weX11. Ayinazo izici ezinhle, kepha ilula kwizinsizakusebenza futhi ilula ngokwedlulele ngokubukeka. Ekugcineni kufanele kube ukusetshenziswa okuhle kwezethenjwa kwe-ICCCM. Izinhlelo ezimbalwa ezihlukile zifakiwe ukuphatha izinhlelo ezisebenzayo, shintsha phakathi kwamawindi, phakathi kwezinye izinto".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina watholakala cishe eminyakeni eyi-15 edlule.
Ivumela ukugcwaliswa kwamawindi nokuhlobisa amawindi kufaka imingcele nebha yesihloko. Futhi, ibha yesihloko inenkinobho ye-meta.
Inikeza ngamawindi anemingcele «engenamsebenzi», landela indlela yewindows ngokuthi «Ayikho i-autoraise», bese uqalisa izinhlelo nge-aemenu »module.
Kubhalwe ku-C, kusebenzisa i-xaw noma i-gtk toolkit, futhi kunomklamo omncane we-modular.
Ayinayo ibha yemenyu, ukusekelwa kwama-desktops amaningi, izithonjana zedeskithophu, iphepha lodonga, izingqikithi kanye nethuba lamawindi aqoqiwe.
Iyalungiswa ngefayela lokumisa, ayisindi futhi idinga igundane lezinkinobho ezi-3 ukuze isebenze kahle.
Le WM endala ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakheji "aewm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"Imenenja yewindi yohlelo lwewindi le-Unix X. Ekuqaleni isuselwa ekubukekeni nasekuzweleni kwesixhumi esibonakalayo se-NeXTStep, inikeza abasebenzisi bokugcina ideskithophu engaguquguquki, ehlanzekile nenhle. Inhloso yokuthuthuka kwe-AfterStep ukuhlinzeka ngokuguquguquka kokulungiswa kwedeskithophu, ukwenza ngcono ubuhle nokusebenzisa kahle izinsiza zohlelo.
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe ngaphezulu kweminyaka engu-7 edlule.
Uma kuqhathaniswa namanye ama-WM, inokusetshenziswa okuphansi kwezinsizakusebenza, futhi inokuzinza okuhle nokulungiswa.
Kubhalwe ku-C futhi kusebenzisa ithuluzi lamathuluzi le-GTK. Futhi, kuya ngePerl ne-Imagemagick.
Ukuhlobisa amawindi kufaka phakathi imingcele nemigoqo yetayitela. Amabha esihloko anezinkinobho zemenyu, ukunciphisa, ukukhulisa, nokuvala. Futhi izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo zingaboniswa kubha yomsebenzi.
Kubandakanya ukusekelwa kwama-desktops amaningi nokushintshwa kwedeskithophu ngemodyuli yokubheja.
Le WM endala ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- Ngemuva kwephakhejiNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"Imenenja yewindi eyakhelwe ohlakeni lwesizukulwane esilandelayo olungiseka kakhulu lwe-X Windows. Kuyashesha kakhulu, kuyelula, futhi kungena ngaphansi kwelayisense le-GNU GPLv2. Ihloselwe ikakhulukazi abasebenzisi abathuthukile, abathuthukisi kanye nanoma ngubani osebenza ngemisebenzi yansuku zonke yekhompyutha futhi ufuna ukuba nokulawulwa okuningiliziwe kwemvelo yabo yokuqhafaza.
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina watholakala cishe eminyakeni eyi-2 edlule.
I-WM ephelele neqinile ekuvumela ukuthi ushintshe phakathi kwesitayela se- "Tiling" noma "Stacking".
Ivumela ukulawula okugcwele ngegundane noma ngekhibhodi ngohlelo lokuphinda ushaye isikhombimsebenzisi somsebenzisi.
Imihlobiso yewindi ifaka imingcele nebha yesihloko, kanti amabha esihloko anesithonjana nezinkinobho zokunciphisa, ukukhulisa, nokuvala. Futhi, imingcele yewindi imincane (cishe iphikseli elilodwa ububanzi).
Kubhalwe ku-C, kunokusekelwa kwesikrini esiningi ngokusebenzisa i-xinerama futhi ibha yedeskithophu inikeza imininingwane yesimo nokusekelwa kwamawijethi wangokwezifiso.
Le WM yamanje itholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe elimangalisayoNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 zokuqala «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile 2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep futhi Awesome, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » 2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep and Awesome: 5 Alternative WMs zeLinux
IVeraCrypt 1.24-Update7 yethula cishe izinguquko ezingama-30 futhi lezi yizona ezibaluleke kakhulu